Soogalootiga qaarkood oo la soo jeediyey in sharciyada loo sahlo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heeyada socdaalka ee Migrationsverket. sawir: Adam Wrafter/SvD/TT
Soogalootiga qaarkood oo la soo jeediyey in sharciyada loo sahlo
Soogalootiga qaarkood oo la soo jeediyey in la siiyo sharciga daganaashaha.
La daabacay onsdag 1 november 2017 kl 10.51
Dadka sharciyada dalkan looga diidey balse sababa jira awgeed aan dalkaan laga masaafurin karin ayaa la soo jeediyey in sharciga daganaashaha dalkan la siiyo.
Taladaan ayaa waxaa dawladda dalkan u soo jeediyey baare ey dawladdu dhankaas u xilsaartey oo lagu magacaabo Anna Lundberg, sida uu qorey wargeyska Dagens Nyheter.
Anna Lundberg ayaa sheegtey in arrinkaani khuseeyo kooxa yar oo maanta khatar ku jira.
Dadkaan ayaa ah dad sharciyada dalkan looga diidey, lana go’aamiyey in dalkaan laga masaafuriyo balse aan masaafurintooda lagu guuleysan.
Anna Lundberg ayaa sheegtey in dadkaasi yihiin kuwa aysan dib u qaadaneyn dalalkii ey ka yimaadeen amaba aan laheyn dal dib loogu celiyo ama ey adag tahay in la caddeeyo ama la cayimo dalka ey u dhasheen.
Anna Lundberg oo arrinkaan ka hadleysa ayaa waxay tiri sidan:
- Waxaanu soo jeediney dhowr fikradood oo ka hortagaya in dadka qaarkood aan sharci dalkaan laga siin hadana eysan dadkaasi dib u noqon karin, sharciga aanu dawladda u soo jeedineyna wuxuu waqti hore sharciga daganaashaha dalkaan u ogolaanayaa dad sharcigaas daganaashuhu ka soo daahi lahaa, ayey tiri Anna Lundberg.
Anna Lundberg ayaa intaas ku dartey in soo jeedinahooda ey ka mid aheyd in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo dadka aan laheyn dal dib loogu celiyo iyo sharci ahaan waxa xaalkooda laga yeelayo, ayey tiri Anna Lundberg.
Tusaale ahaan wiil Mustafe la dhaho oo 18 jir ah ayaa la go’aamiyey in dalka Morocco loo masaafuriyo, isaga laftiisuna wuxuu rabey in uu dalkaas dib ugu noqdo balse dalkaan Sweden ayaa wiilkaas dib loogu soo celiyey .
Laga soo bilaabo bishii juun ee sanadkii hore ayaan qofkii dalkaan codsigiisa sharciga qaxootinimo looga diidey, uusan sii daganaan karin xarumaha deegaan ee hey’adda socdaalka sidoo kalana uusan xaq u laheyn in uu qaato lacagaha la siiyo dadka qaxooyiga dalkaan ka dalbadey.
Hey’adda laanqeyrta cas ayaa horey u canbaareysey habka ey dawladda dalkaani dadkaas ula dhaqantey taas oo ey dheheen in ey tahay mid bani’ aadanimada ka baxsan.
Anna Lundberg ayaa sheegtey in dadkyowga laga jaro lacagaas ey ku noolaan lahaayeen ey soo foodsaaraan dhibaatooyin xoog leh, haddii Sweden ey sidaas ula sii dhaqanto dadkaasna, wuxuu dalkaani khatar ugu jiraa in uu ku tunto xeerarka addunka uga yaala dhanka xuquuqul insaanka, marka si taas xal loogu helo waxaan soo jeediyey in dadkaas sharciga daganaashaha dalkaan la siiyo, ayey tiri Anna Lundberg.
Talooyinkaan uu baaruhu dawladda u soo jeediyey ayaa sharci ahaan si cad u muujinaya in qofka sharciga daganaashaha la siiyo ka dib markii sababa jira awgeed dalkaan looga masaafurin waayo.
Baarahaan ayaa maanta warbixintiisa u gudbin doona wasiirka socdaalka Heléne Fritzon, waxayna baarahaani soo jeedisey in sharciga dhankaas ku saabsan wax laga badalo kaas oo haddii la ogolaado dalkaan ka dhaqan gali doona 1-da bisha september ee sanadka 2018-ka.
Baaraha ayaa sidoo kale soo jeediyey in baaritaano dheeraad ah lagu sameeyo dadka aan laheyn dal dib loogu celiyo iyo xuquuqda ey sharci ahaan dadkaasi yeelan karaan.